OmiseGo စျေး - အွန်လိုင်း OMG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို OmiseGo (OMG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ OmiseGo (OMG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ OmiseGo ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $131 340 376.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ OmiseGo တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
OmiseGo များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OmiseGoOMG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.72OmiseGoOMG သို့ ယူရိုEUR€1.46OmiseGoOMG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.32OmiseGoOMG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.57OmiseGoOMG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr15.56OmiseGoOMG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.10.88OmiseGoOMG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč38.41OmiseGoOMG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł6.45OmiseGoOMG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2.3OmiseGoOMG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2.4OmiseGoOMG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$38.54OmiseGoOMG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$13.35OmiseGoOMG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$9.36OmiseGoOMG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹129.04OmiseGoOMG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.290.73OmiseGoOMG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2.36OmiseGoOMG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.61OmiseGoOMG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿53.7OmiseGoOMG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥12OmiseGoOMG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥182.15OmiseGoOMG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2043OmiseGoOMG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦665.95OmiseGoOMG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽126.24OmiseGoOMG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴47.73
OmiseGoOMG သို့ BitcoinBTC0.000144 OmiseGoOMG သို့ EthereumETH0.00436 OmiseGoOMG သို့ LitecoinLTC0.0296 OmiseGoOMG သို့ DigitalCashDASH0.0178 OmiseGoOMG သို့ MoneroXMR0.0183 OmiseGoOMG သို့ NxtNXT123.94 OmiseGoOMG သို့ Ethereum ClassicETC0.248 OmiseGoOMG သို့ DogecoinDOGE495.69 OmiseGoOMG သို့ ZCashZEC0.0185 OmiseGoOMG သို့ BitsharesBTS65.33 OmiseGoOMG သို့ DigiByteDGB59.1 OmiseGoOMG သို့ RippleXRP5.83 OmiseGoOMG သို့ BitcoinDarkBTCD0.0572 OmiseGoOMG သို့ PeerCoinPPC5.53 OmiseGoOMG သို့ CraigsCoinCRAIG756.5 OmiseGoOMG သို့ BitstakeXBS70.81 OmiseGoOMG သို့ PayCoinXPY28.98 OmiseGoOMG သို့ ProsperCoinPRC208.3 OmiseGoOMG သို့ YbCoinYBC0.000892 OmiseGoOMG သို့ DarkKushDANK532.36 OmiseGoOMG သို့ GiveCoinGIVE3594.04 OmiseGoOMG သို့ KoboCoinKOBO378.35 OmiseGoOMG သို့ DarkTokenDT1.59 OmiseGoOMG သို့ CETUS CoinCETI4792.44
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Mon, 10 Aug 2020 05:55:02 +0000.